[OFFICIAL] dr.fone toolkit - iOS Whatsapp yokuGqithisela, Sekela & Buyisela
dr.fone toolkit - iOS Whatsapp yokuGqithisela, Sekela & Buyisela
Handle Your Whatsapp Chat, Ngokulula & eguquguqukayo
Dlulisela iOS Whatsapp iPhone / iPad / iPod touch / izixhobo Android.
imiyalezo Backup okanye kumazwe iOS Whatsapp iikhompyutha.
Buyisela iOS WhatsApp yogcino iPhone, iPad, iPod touch kunye nezixhobo Android.
Transfer Whatsapp Imbali kwamandla kunye ngokukhetha
Enoba unayo isixhobo ngaphezu kwesinye okanye nje ufuna ukutshintsha ifowuni yakho endala kunye entsha, ungasebenzisa le program ukudlulisela ngokukhetha imbali yakho wengxoxo kuWhatsApp phakathi iPhone yakho iPad. Emva kokutshintshela isixhobo Android, oko kunceda ukutshintshela Whatsapp izingxoxo iPhone / iPad kwisixhobo yakho entsha Android. Nayiphi na into ofuna, kuquka iziqhoboshelo.
Transfer WhatsApp Imiyalezo ngokukhetha
Uyakwazi imiyalezo WhatsApp ukusuka izixhobo iOS iOS okanye izixhobo Android zikhethwe.
Imiyalezo Yogcino WhatsApp Ngokulula
Ungasebenzisa imiyalezo WhatsApp ukhuphelo kwi iPhone yakho / iPad ukuya ikhompyutha ngokucofa kanye.
IMbonakalo-WhatsApp Backup Content
Unako ukufunda zonke iinkcukacha e Whatsapp yakho ifayile elilalela, ezifana imiyalezo nezifakelo. Jonga into oyifunayo.
Imiyalezo Rhweba ngaphandle ku Whatsapp Eyogcino
Uyakwazi emane ukuthumela imiyalezo evela Whatsapp yogcino njenge fayile HTML. Kuhle ukuba yokuprinta okanye wabelane ngayo.
Njengoko ukubuyisela imiyalezo WhatsApp, unako ukubuyisela ukuba zombini iOS kunye nezixhobo Android. Yinto umsebenzi unqakrazo olunye-.
Le backup kuWhatsApp kunye nokubuyisela inkqubo yokufunda-kuphela ngokupheleleyo software. Oku kuthi, aguqule okanye ukuvuza nayiphi na idatha kwidivaysi yakho okanye kwi ifayile elilalela. Sithatha data yakho yobuqu akhawunti nzulu. Wena sihlale njalo umntu kuphela ngubani na ukufikelela kuyo.
Ukuncokola WhatsApp Backup okanye Rhweba ngaphandle
It yenza ukhuphelo yembali yakho WhatsApp kulula kakhulu kunangaphambili. Idibanisa iPhone yakho / iPad kwaye enza nqakraza omnye, lo backup isebenza ngokwayo. Ngaphandle, unakho ukuwufunda kuqala uze uhlole nayiphi na into ofuna kwaye kumazwe angaphandle kwi khompyutha yakho njengento fayile HTML ukufunda okanye yoshicilelo.
Buyisela kuWhatsApp Backup iOS / Devices Android
Ethetha iifayile backup kuWhatsApp, unako ukuzicima ukusuka kwikhompyutha yakho ukuba awufuni ukuba kubagcina, kwaye ndiyibuyisele iPhone / iPad okanye Android izixhobo zakho xa kukho isidingo esinjalo. Oku kungenziwa ngaphakathi okukodwa.
Ithi kuphela idatha, akukho data emngciphekweni.
100% software ekhuselekileyo, akukho nto imbi kwi computer yakho okanye isixhobo.
Yinto nakowuphi na umntu, akukho lwazi zobuchwepheshe wabuza.
30 Usuku Free Trial
Ungazama le software simahla kangangeentsuku ezingama-30.
Iifayili WhatsApp ezixhasiweyo
iOS 10, iOS 9 nabo
dr.fone toolkit Ndincede wadlulisela ngempumelelo data WhatsApp ukusuka Phone yam endala Android ku SE yam entsha iPhone.
dr.fone toolkit kuyinto isicelo professional eyenzelwe kwakhona iifayile ezivela isixhobo Android ngqo ukubuyisa SMS esusiwe kunye nabafowunelwa, kuquka amagama, amanani kunye iidilesi ze-imeyile, kumazwe angaphandle ukuba HTML, kwakunye iifoto nevidiyo ezilahlekileyo ngenxa ekususeni.
Satisfaction le software lulunge kakhulu ukubuyisela data WhatsApp.
Imiyalezo WhatsApp Backup Online kwi-Android kunye iPhone
Indlela Yokubuyisela WhatsApp Imiyalezo kwi Devices iPhone ne Android
Indlela Buyisa esusiwe WhatsApp Images / Umfanekiso
Indlela Backup okanye Rhweba ngaphandle WhatsApp Imiyalezo evela iPhone
Indlela Buyisa WhatsApp Imiyalezo on iPhone
Whatsapp yeSistim Extractor: Funda WhatsApp Iincoko kwikhompyutha yakho
6 Iindlela Imiyalezo WhatsApp Eyogcino
Eguquguqukayo backup & ukubuyisela izingxoxo viber kwi iPhone yakho, iPad, okanye ikhompyutha.